जेठ ८, काठमाडौं । को`रोना भाइ`रसको महा`मा`री नसकिँदै विश्वमा ‘मंकीपक्स’ नामक अर्को भाइ´रसको बढ्दो संक्र´मणले धेरैको ध्यान ता´नेको छ । पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको ‘मंकीपक्स भाइ´रस’ बेलायत, युरोप र अमेरिकाका १२ देशमा पुगिसकेको छ ।
‘मंकीपक्स’ भाइ´रस पहिलो पटक सन् १९५८ मा अनुसन्धानमा राखिएका बाँदरहरुमा देखिएको थियो । त्यसपछि मानिसमा भने सन् १९७० मा कंगोमा देखिएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा सिंगापुरमा नाइजेरियाबाट आएका एक व्यक्तिमा ‘मंकीपक्स भा`इरस’ पुष्टि भएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म १२ देशका ८० भन्दा बढी व्यक्तिमा मं`कीपक्स संक्र`मण पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै अरु ५० जनामा सं`क्रमण पुष्टि भएको आशंकामा अनुस`न्धान गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म युरोपका संयुक्त अधिराज्य, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, इटली, स्वीडेन लगायतका देशमा ‘मंकीपक्स’ भाइ`रस देखा परेको छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार यो भा`इरस संक्र`मणको स्रोत यकीन भएको छैन । मंकीपक्स संक्र`मितको सम्पर्कमा नरहेकाहरुमा पनि संक्र`मण भेटिएको छ । पछिल्लो समय बेलायतका संक्र`मितको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नदेखिएकाले ‘मंकीपक्स’ समुदायस्तर सम्मै पुगिसकेको भन्ने विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन् ।
नेपालका संक्रा`मक रो`ग विशेषज्ञहरु उक्त भाइ`रसले स्वरुप परिवर्तन गरेको आं`कलन गर्दै कोभिड–१९ को जस्तै लहरकै रुपमा फैलिनसक्ने अनुमान गर्छन् ।
पछिल्लो समय देखिएको मंकीपक्स भाइ`रस विश्वव्यापी लहरकै रुपमा देखापरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । संक्र`मित व्यक्तिको सम्पर्कमै नभएकाहरूमा पनि देखिएकाले यसको संक्र´मण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने चि`न्ताको बिषय बनेको डा. पुनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै मंकीपक्स भाइ`रस असामान्य र गैरस्थानिक बनेर फैलिएको जनाएको छ । ‘मंकीपक्स भाइरस’ संक्र`मित जनावरको शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ अथवा रगतबाट मानिसमा सर्ने गर्छ । विशेषत अफ्रिकी मुसा वा बाँदरबाट यो मानिसमा सं`क्रमण गर्न सक्छ ।
मानिसबाट मानिसमा भने थुकको छिटा, खुल्ला छाला, मुख, आँखामा भा`इरस परे सर्न र सं`क्र`मण गर्न सक्दछ । हाल बेलायतमा देखिएका ‘मंकीपक्स’ संक्रमितमध्ये कतिपय गे, बाई से`क्सुअलहरु पनि छन् । जसले सं`क्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने बहस जन्माएको छ,’ डा. पुनले भने ।
डब्लयूएचओका अनुसार सं`क्र`मितसँग नजिकमा रहने व्यक्तिमा ‘मंकीपक्स’ सर्ने जोखिम हुन्छ । बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका अनुसार यो भाइ`रसको सं`क्रमण छिटो फैलिन्छ र अधिकांश मानिसहरू केही हप्तामा नि`को हुन्छन् । भा`इ`रस मानिसमा सजिलै सर्दैन र व्यापक जनसमुदाय जो`खिममा पर्ने सम्भावना कम रहन्छ ।
अहिले मंकीपक्स देखिरहेको देशमा भाइ`रसको स्वरुप परिवर्तन भएकाले म`हामा`रीका रुपमा फैलनसक्ने ख`त`रा पनि उत्तिकै रहेको संक्रा`मक रो`ग विशेषज्ञ डा. प्र´भा´त अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यो भाइ´रसका दुई प्रका बढी लक्षण देखाउँछ, र पश्चिम अफ्रिकामा पाइने अर्को भेरियन्ट जसले हल्का लक्षण मात्रै देखाउँछ ।
‘मध्य अफ्रिकाको भेरियन्टले १० प्रतिशत र पश्चिम अफ्रिकामा पाइने भरियन्टले २ देखि ३ प्रतिशत मृ`त्यु गराउने पाइन्छ’, डा. अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मध्य अफ्रिकाको भेरियन्टले को`रोना भन्दा तीन गुणा बढी मृ`त्यु गराउँछ ।’
तर, अहिले फैलिएको भेरियन्ट पश्चिम अफ्रिकामा पाइने भेरियन्ट (कम घा`तक ) चाहिँ हो । ‘यो भाइ`रस सामान्यता मानिसमा खुल्ला छाला र थुकको छिटाबाट सर्ने देखिएको छ । तर, युरोपतिरका केशहरु हेर्दा कहाँबाट स¥यो भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन । भाइ`रसले स`र्ने स्वरुप परिर्वतन गरेको हो कि भन्ने ड`र भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
चिकित्सकका अनुसार संक्र`मण भएको ५ देखि २१ दिनसम्ममा ‘मंकीपक्स’ को लक्षण देखिने गर्छ । ज्वरो आउनु, टाउको र जिउ दुख्नु, जाडो लाग्नु, लिम्फ ग्रन्थीहरु सुन्निनु यसका प्रारम्भिक लक्षणहरु हुन् । यी लक्षण देखिएको १ देखि ३ दिनसम्ममा अनुहार तथा शरीरका अन्य भागमा बिबिराहरु देखिन थाल्छन् र ती चिलाउँछन् । पछि पानी फोका हुँदै, फुट्दै, सुक्दै जान्छन्, तर दाग बसिरहन सक्छ । ‘मंकीपक्स’ सामान्यतय २ देखि ४ हप्तामा आफैँ निको हुने गर्दछ । तर झन्डै दश संक्रमित मध्य एकको भने जटि`लताको कारणले मृ`त्यु हुने देखिएको संक्रा`मक रो`ग विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
डा. पुन लामो समयसम्म मंकीपक्सका कारण घा`उको दाग रहने हुँदा समाजिक वि`भेद भोग्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल कति जो`खिममा ?
पछिल्लो समय हवाइ यातायातको सहज पहुँचले गर्दा युरोपका देशमा बढिरहेको उक्त भा`इर`स आगामी दिनहरुमा नेपालमा पनि नआउला भन्न नसकिने जनस्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् । संक्र`मण पुष्टि भएका देशबाट मानिसहरू आउजाउ गरिरहने भएकाले नेपालमा सतर्कका आवश्यकता भएको डा. पुनले बताए ।
अहिलेसम्म नेपालमा उक्त भाइरसको संक्र`मणको शंका नगरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दास बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मानिसबाट मानिसमा सरेको पाइएको छैन । तर, कपडाहरूबाट सर्छ भनिएको छ । नेपालमा हालसम्म देखिएको छैन । सरुवा रो`ग भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा हामी जानकार छौं,’ डा. दासले भने ।
मंकीपक्सको अहिलेसम्म कुनै उपचार छैन । तर, संक्र`मणको रोकथाम र प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । मंकीपक्स भाइरसको वि`रुद्ध बिफरको खोप प्रभा`वकारी हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । मंकीपक्स भाइरसको वि`रुद्ध इम्युनिटी (रो`ग प्र`तिरो`धा`त्मक क्षमता) नभएका कारण संक्र´मण फैलिने ड`र भएको उनको तर्क छ । समाचार संस्था बिबिसीले बिफर र मंकीपक्को भाइरसमा निकै समानता रहेको र बिफर वि`रुद्धको खोपले ८५ प्रतिशत सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ ।
‘बालबालिका लागि दिइने बिफरको खोप धेरै समय पहिला नै उन्मूलन भएकाले बन्द गरिएको थियो । जसले मंकीपक्स भाइ`रस र बिफरबाट नै जोगाउथ्यो’, डा. अधिकारीले भने, ‘अहिले बिफरको खोप नलाएकाले संसारभरका मानिस मंकीपक्स भाइ´रसबाट संक्र`मित हुने देखिन्छ ।’
शरीरमा बिबिराहरु आउने हुँदा मंकीपक्स वा ठे`उला के हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुने डा. पुन बताउँछन् । यदि कोही व्यक्तिमा शरीरमा बिबिराहरु देखिएका छन्, संक्र`मण फैलिरहेको देशबाट फर्किएको हो र शरीरमा बि`बिराहरु देखिएको छ भने शं`काको घेरामा राख्नुपर्छ । थप प्रयोगशालामा परीक्षणमा पठाउनुपर्छ,’ डा. पुनले भने । अन्लाईन खबर बाट
२०७९ जेष्ठ ९, सोमबार ०९:४२0Minutes 254 Views